Impolite Police of Burma? | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
Impolite Police of Burma?	November 15, 2008
Filed under: OTHERS' NEWS — Nyo Gyi @ 12:37 am
“ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် စားခွက်လုကြသော ရဲများ ´´
( ၁၃ . ၁၁ . ၂၀၀၈ ) ရက်နေထုတ် စစ်အစိုးရရဲ့ အူကြောင်ကြောင် သတင်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာအလင်းအတင်းစာ စာမျက်နှာ ( ၇ ) မှာ ရန်ကုန်တိုင်း ကရဲတပ်ဖွဲ့ အချင်းချင်း စားခွက်လုကြရင်းနဲ့ ပြည်သူတွေ မြေစာပင်ဖြစ်သွားရရှာတဲ့ သတင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်ရင်းက ထိုအဖြစ်အပျက်ရဲ့ အမှန်ဖြစ်ရပ်လေးကို ပြည်သူတွေ အမှန် အတိုင်းသိရှိအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်တာပါ။
ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးလက်အောက်မှာ ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးဌာနစုဆိုတဲ့ ဌာန တစ်ခုရှိ်ပါတယ်။ ထိုဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးဌာနစု ဟာ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ အရမ်းကို လက်စွမ်းထက်တဲ့ ( အတောင်းကြမ်းတဲ့ ) ဌာနတစ်ခုပါ။ ထို ထိုဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးဌာနစု ကို ရောက်ဖို့အတွက် ဒုရဲအုပ် တစ်ယောက်ဟာ တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးကို အနည်းဆုံး သိန်း သုံးဆယ်နဲ့ ဌာနစုမှူး ရဲအုပ်-မြင့်သောင်း ကို ဆယ်သိန်း ပေးမှ ထိုဌာန ကိုရောက် ရတာပါ။ ထိုဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးဌာနစုဟာ ရန်ကုန်တိုင်း မှာရှိတဲ့ ယာဉ်ထိန်းတွေထက် ပိုက်ဆံပိုရတဲ့ ဌာနပါ။
အဲဒီလို ပိုက်ဆံတွေရင်းပြီးရောက်ရတဲ့ ဒုရဲအုပ်ကစလိုအဲဒီဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးဌာနစု က ၀န်ထမ်းတွေဟာ မိမိတို့ကုန်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ပြန်ရဖို့အတွက် မသမာတဲ့ နည်းတွေ ကိုသုံး/ခြိမ်းခြောက်ပြီး ငွေရှာနေကြတာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးဌာနစု က လူတွေက အပိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းက ရဲတွေရဲ့စားကွက် တွေကို လိုက်လုရင်းက ကြားထဲက ခံသွားရတာက ပြည်သူတွေပါ။ တကယ်တော့ ကိုကျော်တင့်တို့က ဖမ်းမိတဲ့ မီးပန်းတွေကို ရှန်ဟိုင်းကုန်တိုက်နားမှာ ရောင်းဖို့ ယူလာတာပါ။ အဲဒီ မီးပန်းတွေ ရောင်းဖို့အတွက် ရှန်ဟိုင်း ကုန်တိုက်နားမှာ မီးပန်းရောင်းတဲ့ လူတွေ ပေါင်းပြီး လသာရဲစခန်းနဲ့ လမ်းမတော် ရဲစခန်းက ရဲစခန်းမှူးတွေကို ( ၃ ) သိန်း ၊ အပိုင်နယ်ထိန်းတွေကို ( ၅ ) သောင်း၊ အပိုင်နယ်မြေ ရဲကင်းကို ( ၃ ) သောင်းနဲ့ အပိုင်ရပ်ကွက်ရုံးတွေကို ( ၃ ) သောင်းစီ ပေးပြီးမှ ရောင်းရ တာပါ။
အဲဒီလို ပိုက်ဆံတွေပေးပြီး မီးပန်းတွေရောင်းနေတာကို သိတဲ့ ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေး ဌာနစုက နယ်မြေတာဝန်ခံက သူတို့ကိုလည်း လိုင်းကြေး ( ၃ ) သိန်းတောင်းပေးဖို့ပြော တာကို အပိုင်နယ်ထိန်းက မတောင်းပေးတဲ့ အတွက် ကိုကျော်တင့် ၊ ကိုစိန်သန်း နဲ့ မမိုးမိုးခိုင် စတဲ့ လူတွေကို ဒ/န က အစမ်းဖမ်းပြလိုက်တာပါ။ အဲဒါမှ ကျန်တဲ့ လူတွေက ပေါင်းပြီး ဒ/န က နယ်မြေတာဝန်ခံကို အပိုင်နယ်ထိန်းကတဆင့် ( ၃ ) သိန်းပေး လိုက်ရ ပါတယ်။ အဲဒီလိုတောင်းတဲ့ ပိုက်ဆံပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ ရှန်ဟိုင်းကုန်တိုက်နားမှာ အေးအေးဆေးဆေး ရောင်းခွင့်ရသွားကြပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကို မသိတဲ့ ဒ/နက ဌာနစုမှူး ရဲအုပ်-မြင့်သောင်း က မျက်နှာ လိုချင်တာနဲ့ တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကို သတင်းပို့ရာက ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ထိုသတင်းက အူကြောင်ကြောင် မြန်မာအလင်းအတင်းစာ ထဲမှာ မှုခင်းသတင်းအနေနဲ့ပါလာရတာပါ။
ထိုအပေါ်က အဖြစ်အပျက်လိုမျိုး လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာလဲ ဖြစ်သွားသေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး – ဒုတိယရဲမှူး – ခင်မောင်စိန် နဲ့ စခန်းမှူး ရဲအုပ် – ၀င်းထွန်း တို့ က အထူအပါး နားလည်စွာနဲ့ ဒ/န အဖွဲ့ကို တောင်းတဲ့ ပိုက်ဆံ ပေးလိုက် တဲ့အတွက် ထိုသတင်းကတော့ မြန်မာအလင်းအတင်းစာ ထဲမပါလာရတာပါ။ ဒီလို အေးအေး ဆေးဆေး ပြီးသွားပေမဲ့ ကာယကံရှင်ကတော့ အိမ်ကို သိန်း ( ၃၀ ) နဲ့ ပေါင်လိုက်ရတဲ့ အဖြစ်ရောက်သွားပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ပြည်သူများအနေနဲ့ ရဲ ကိုလိုင်းကြေးပေးပြီးပြီ ဆိုပြီး မပေါ့ကြပါနဲ့။
[ Ref: http://www.myanmar.com/newspaper/myanmarahlin/Nov13.pdf ]